Samachar Batika || News from Nepal » शुक्रबार, बिहानै के-को पूजा गर्ने ? शुक्र ग्रहको प्रभाव र प्रसन्न पार्ने उपाय
शुक्रबार, बिहानै के-को पूजा गर्ने ? शुक्र ग्रहको प्रभाव र प्रसन्न पार्ने उपाय
सबैको आआफ्नै धार्मिक आस्था हुन्छ । यो स्वभाविक हो । धर्मशास्त्र अनुसार प्रत्येक दिनको महत्व फरक छ ।
यही फरक महत्वलाई बुझ्न सके दैनिकी सहज बन्ने छ । आज शुक्रबार । हिन्दू धर्मावलम्बीहरुले आजको दिन शुक्रका साथै सन्तोषी माता र वैभवलक्ष्मीको पूजाआराधना गर्दछन् ।
यीनीहरुको व्रत विधि भने अलग-अलग हुन्छन् । यो दिन सेतो कपडा लगाउनु पर्छ । शुक्रबार घरमा खीर बनाएर गरिबलाई बाँड्नाले घरको भण्डार भरिने विश्वास छ । शुक्रबारको दिन सन्तोषी माताको व्रत बस्ने पुरुष तथा स्त्रीले सुख-शान्ति तथा मनोकांक्षा पूरा हुनेछ ।
शुक्र ग्रहलाई प्रेमको प्रतीक मानिन्छ । जसको जन्म कुन्डलीमा शुक्र आफ्नो दशाको कारण अशुभ फल दिइरहेको छ । र यसको प्रभावले विभिन्न रोगको सामना गर्नु परिरहेको छ भने शुक्रलाई खुशी बनाए बि’ग्रिएको ग्रह सुद्दिकरण गर्नुपर्छ ।
शुक्रसँग सम्बन्धित रत्नको दानले पनि लाभ मिल्नेछ । यस वस्तुहरुको दान शुक्रबारको दिन सन्ध्या कालमा कुनै युवतीलाई दिनु उत्तम हुन्छ ।शुक्र ग्रहसँग सम्बन्धित दशाले समस्याग्रस्त हुनुहुन्छ भने शुक्रबारको दिन व्रत बस्नु पर्दछ ।
प्रकाशित मिति ५ बैशाख २०७७, शुक्रबार ००:०९